ချစ်သောသူ - ဟာသလေးများ
အချစ်တွေနဲ့ နေကြမယ် အမုန်းတွေကို ဝေးဝေး မှာထားလိုက်ကြရအောင်
တစ်ခါက အာရပ်ကုန်သည် တစ်ဦးတွင် သန်မာလှပသော မြင်းတစ်ကောင်ရှိသည်။
ထိုမြင်းသည် တစ်နေ့အတွင်း မိုင်ပေါင်းများစွာ ခရီးတွင်နိုင်သောကြောင့်
ကုန်သည်မှာ အလွန်မြတ်နိုးခဲ့သည်။ ကုလားအုတ်တစ်ကောင် ပိုင်ဆိုင်ထားသော
ဒုတိယကုန်သည် တစ်ဦးက အပြေးသန်သော ထိုမြင်းကို မျက်စိကျခဲ့သည်။
တစ်နေ့တွင် သူသည် မြင်းပိုင်ရှင်အား ကုလားအုတ်နှင့်မြင်း လှဲလှယ်ရန်
စကားကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ မြင်းပိုင်ရှင်က ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ဤမြင်းအား ရှိသမျှ
စည်းစိမ်နှင့် လှဲမည်ဟု တောင်းဆိုပြန်သည်။ မြင်းပိုင်ရှင်က ဤမြင်းသည်
မိမိဘ၀အတွက် အကောင်းဆုံး အဖော်မွန်၊ မိမိအသက်ရှင်နေသရွေ့ မြင်းအား
ဘယ်အရာနှင့်မျှ မလှဲနိုင်ဟု ငြင်းဆိုပြန်သည်။ ကုလားအုတ်ပိုင်ရှင်က
မြင်းအား အလွန်နှစ်သက်မိသဖြင့် မြင်းအား ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် အမျိုးမျိုး
တစ်နေ့တွင် သူသည် အ၀တ်အစား အစုတ်အပြတ်ကို ၀တ်ဆင်လျှက်
မြင်းပိုင်ရှင်လာရာလမ်း တစ်နေရာတွင် ဖျားနာချင် ဟန်ဆောင်ပြီး လဲလျောင်း
နေခဲ့သည်။ မြင်းပိုင်ရှင်က တွေ့သောအခါ မြင်းပေါ်မှ အလျှင်အမြန်ဆင်းပြီး
ဖျားနေသော သူ့အား မြင်းပေါ်သို့ ပွေ့တင်လိုက်သည်။ မြင်းပေါ်ရောက်သည်နှင့်
သူသည် လူကောင်း ပကတိဖြစ်သွားပြီး မြင်းပိုင်ရှင်အား " ဒီမြင်းကို
ပိုင်ဆိုင်ရဖို့ ကျွန်တော် အကြံအမျိုးမျိုး ထုတ်ခဲ့တယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့
ပစ္စည်းတွေနဲ့ လှဲခဲ့တယ်။ ခင်ဗျား လက်မခံခဲ့ဘူး။ အခုကျွန်တော် မြင်းပေါ်
ရောက်နေပြီ... ဒီမြင်းကို ကျွန်တော် ပိုင်သွားပြီ" ဟု ပြောလေသည်။
မြင်းပိုင်ရှင်က " ကောင်းပြီလေ... မြင်းကို ခင်ဗျားပိုင်သွားပါပြီ...
ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားထွက် မသွားခင် ကျွန်တော်စကားတစ်ခွန်း ပြောချင်သေးတယ်။
ဒီစကားကို ခင်ဗျား သေချာမှတ်ထားပေးပါ"
" မြင်းကို ကျွန်တော်ပိုင်ပြီပဲ... တစ်ခွန်းမကဘူး..ခင်ဗျားကြိုက်သေ
" တကယ်လို့ လူတွေက ဒီမြင်းကို ခင်ဗျားဘယ်လို ရခဲ့သလဲလို့ မေးလာရင်
အဖြစ်မှန်ကို မပြောပါနဲ့..ဒီစကားကို မှတ်ထားပေးပါ"
"ဒီမြင်းကို ဘယ်လိုရခဲ့တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း အမှန်ကို ခင်ဗျားပြောခဲ့ရင်
နောင်တစ်ချိန် လမ်းဘေးမှာ ဖျားလို့ လဲနေတဲ့ လူတွေကိုတွေ့ရင် ဘယ်သူက
မြင်းပိုင်ရှင်၏ ထိုစကားကို ကြားသောအခါ ဒုတိယကုန်သည်မှာ တခဏမျှ
ဆွံအသွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရှက်ရွံ့ အားနာပြီး မြင်းပေါ်မှ
ချက်ချင်းဆင်းကာ မြင်းပိုင်ရှင်အား တောင်းပန်လေသည်။
"ရမ္မက်လောဘနဲ့ လိုချင်တပ်မက်တဲ့ စိတ်က ကျွန်တော်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့
ရိုးသားမှုကို ပုံပျက်အောင် လုပ်ခဲ့မိတယ်။ အရှက်တရားနဲ့ နောင်တတွေ
ရလိုက်ပါတယ်။ ခင်ဗျားရဲ့ မြင်းကို ပြန်ယူပါ... ကျွန်တော့်ကို
သစ်ရွက်လေးတွေကိုလေတိုးလို့ တရှဲရှဲ ဆိုပြီးမြည်တဲ့အသံက......
ဘမောင်တစ်ယောက်တည်းပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ................. အင်တာနက်ဆိုင်ကိုသွားခဲ့တယ်..............
ဘမောင်တို့ ဦးလေးတွေထိုးတာပေါ့နော်..........
ဟာလ၀ါအိုးရဲ့ အောက်ကမီးပိုတောက်အောင်ဆိုပြီး.......
ဟာလ၀ါအိုးကိုမလွတ်ပစ်ရက်တာနဲ့ မသိတဲ့..................့ လူတွေကိုဝေပေးလိုက်ရတယ်လေ..............
အဲ့ဒီမှာပဲခူးသားနှစ်ကောင်နဲ့ တွေ့ တယ်လေ......
တစ်မျိုးမူတဲ့ ပဲခူးသူတွေကဘမောင်ကိုကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့ .........
''အရှင်ရုက္ခစိုးနတ်မင်းကြီး.ကျွန်တော့်သားလေးကိုဗေမယူပါနဲ့
ကျွန်တော့်အိမ်မှာအိမ်သာမရှိတဲ့ အတွက်......'' ဆိုပြီး
ရုက္ခစိုးကိုင်မှာကိုကြောက်လို့ တဲ့ ............လေ
အဲ့ ဒါနဲ့ ပြေးရင်းပြေးရင်းနဲ့ ပဲ........
အဲ့ဒါနဲ့ အိမ်ထဲကိုဝင်တာနဲ့ မှောင်မနြေတာပဲဘာမှမမြင်ရ၀ူးလေ....
ဘမောင်လဘြိုထိုင်အိမ်သာလို့ ထင်ရတဲ့ ဝိုင်းဝိုင်းကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ တော့..
''ဗြစ်......ဗြစ်.....ဗြီး''ဆိုတဲ့့အသံကအိမ်တောင်တုန်သွားတော့တယ် .......
ကိစ္စပြီးတော့အပေါ်မှာကျနေတဲ့ ကြိုးလေးကိုရေဆွဲတဲ့ ကြိုးလို့ မှတ်ပြီးဆွဲလိုက်တယ်............
လို့ ဘမောင်အလန့် တကြားအော်လိုက်တယ်
ဘမောင်ကိုစိမ်းစိမ်းကြည့့််နေတဲ့ ပါးစပ်အဟောင်းသားနဲ့ 
''အိမ်သာယာ''လို့ ရေးထားတာ ဘမောင်ကအိမ်သာတက်ချင်ဇောနဲ့ ''ယာ''ကိုမမြင်ပဲ နဲ့
အိမ်သာ လို့ သွားဖတ်တာကို
ဘမောင်လို မြန်မာတစ်ယောက်ကို''(၁)-နို့ သီး၈လုံးခွေးမကြီးရဲ့ သား''
ဖော်ရိမ်ငနာကြီးရဲ့ ဖာတ်ပိုးကိုအုပ်ပြီးတော့မှခုပြောနေတဲ့ ''''''သတိထမင်းစားရင်းမဖတ်ရ:(1000%ဟာသနော်)''''ဆိုတဲ့ ဘလော့ကိုစရေးတော့တယ်
ဖော်ရိမ်နာကြီးသတိပြန်ရလာပြီးဘမောင်ကိုအပြင်မှာ ၀မ်းဘိုင်ဝမ်းချဖို့ စိမ်ခေါ်လို့ .........
၁ ပတ်ခန့် အကြာတွင်
ဖော်ပြရန်မလို တော့ ဟုထင်ပါသှ်........
PS: ... ခလေးမ ...... လာ .. လာ. ... ကိုကြီးအနားလာ ........ တိုကြီး က လူပြိုကြီး
လို့ .......... အော်ဟစ်နေကြသူ လူပြို (not လူပျို) များအတွက်
နောက် အငွေ့ တထောင်းထောင်းထနေသော မနက်စာကို မြိန်ရည်ယှက်ရည် သူစားလိုက်သည်။
modren ယုန်နဲ့ လိပ် ပုံပြင်
ပျားရည်ဆမ်းခရီးထွက်ရန် ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် သားဖြစ်သူကို သူ၏
စာကြည့်ခန်းထဲသို့ခေါ်ပြီး ကျည်ဆံ နှစ်တောင့်နှင့်
"ဒီမှာ ငါ့သားလူလှရေ၊ မင်းတို့ ပျားရည်ဆမ်းခရီး မင်္ဂလာဦးညမှာ မင်းမိန်းမ
မချောမေ အပျိုစင် မဟုတ်ဘူးဆိုရင် မင်းမိန်းမကို ပစ်သတ်ပေတော့။
အပျိုစင်အစစ်ဆိုရင်တော့ လေထဲမှာ တစ်ချက် ထောင်ပစ်ဟေ့ .. ကြားလား" ဟု
ဖခင်ဖြစ်သူက မောင်လူလှကို မှာလေသည်။
ပထမညတွင်တောင့် မောင်လူလှလေးသည် လေထဲတွင် သေနတ်တစ်ချက် ထောင်ပစ်လေသည်။
ဒုတိယညမှာတော့ မချောမေကိုတည့်တည့်ပစ်လေသည်။ အကြောင်းမှာ
ကုန်ကျမဲ့ အသုံးစရိတ်ငါတွက်နေရတယ်
အသကုန်ကျတဲ့ စာမေးပွဲအတွက်စာကျက်နေရတယ်
နောက်နှစ်ဘွဲ့ ယူနိုင်ဖို့ ........................
အလုံ နားကအမျိုးသမိး တစ်ယောက်အတွက် ခေါင်းခြောက်နေရတယ်
A to Z ပေါက်ကရ
Aaa ................... ဆိုတဲ့အေးရိပ်သာယာလေးမှာ အ ကြင်နာကဘာ ငယ်လေးပျက်စီးခဲ့ပါ B
Bb...................... ဘရန်ဒီသောက်ခါစိတ်ဖြေမည်
C c ..................... အတွေးတွေအစီအရီတွေးတော့ ပကာသနမရှိလို့ မမုန်းတာဖြစ်မည်
Ddd .................. နေရာလမ်းခွဲတာအတည်..............တယောက်ထဲ
E F G .................. ခရီးဆက်ခဲ့ပါသည်....ကိုယ်
ံH ....................... မရအိပ်မရတဲ့ညတွေများနေပြီ........
I ......................... ကိုတွေ့တောင်ခြေမဆေးတဲ့ယောကျာ်း ကတိ ပေးတာ မှားကုန်ပြီ
J K L M N O P .... အခြေအနေတလွဲကံချော်ပြီ...
Q R S T................ သူညာရက်ပါသည်
U V နဲ့W............... မတူညီတဲ့နှစ်ခု.....
X Y Z.................... လိုဆက်လို့မရနိုင်ပြီ်..................!
ဘုန်းကြီးက ။ ။ ဟဲ့ဒကာမ၊ ဘာဖြစ်လို့လာသတုံး။
ဘုန်းကြီး ။ ။ ဟာ ဘုန်းကြီးက လူထွက်တာ ဘယ်ကမ္ဘာကမှမရှိဘူးဟ။
တစ်နေ့က လာအပ်တဲ့ ကလေးနှစ်ယောက် ဟာဘယ်သူက
ဘုန်းကြီး ။ ။ အိမ်း တစ်သက်လုံးမှတ်ထား၊ ဒကာမကသာ လူထွက် သဟ။
မောင်ခွေးသည် အိမ်စာစာအုပ်ကို ဆရာအားပေးလိုက်ရာ ဆရာက
မောင်ခွေး၏ စာအုပ်ကို သေသေချာချာ ကြည့်ပြီးနောက်
"ဟေ့ မောင်ခွေး။ ဒီဟာ မင်းရေးတာလား။ မင့်အဖေလက်ရေးနဲ့တူနေပါလား။
"သြော် ကျွန်တော်ရေးတာပါဆရာ၊ နို့ပေမယ့် ဖေ့ဖေ့ဖောင်တိန်နဲ့ရေးလို့ ဖေ့ဖေ့
စိတ္တဇ ဟာသများ (၃)
လူနာများသည် နံပါတ် တစ်ခုကိုအော်ဟစ်နေကြ ရာဆေးရုံတစ်ခုလုံး ဆူညံနေသည်။ ဆရာဝန်တစ်ယောက် ကလူနာများကို
လူနာများကအပေါ်ကို လက်ညိုးထိုး ပြကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆရာဝန်လည်း အပေါ်ထပ်ကို တက်သွားသည်။ အပေါ်ထပ်တွင်လည်း
လူနာများက အပေါ်ကို လက်ညိုးထိုးပြကြပြန်သည်။အဲဒါနဲ့ ဆရာဝန်လည်း အပေါ်ထပ်ကို တက်သွားသည်။
လူနာများကအောက်ကို လက်ညိုးထိုး ပြကြတယ်။ ဆရာဝန်လည်း အောက်ထပ်ကိုငုံ ကြည့် လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ နောက်နားက လူနာက ဆရာဝန်ကို လေးထပ်တိုက်ပေါ်ကနေ ကန်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့လူနာတွေက ဆက်ရွတ်ကြတယ်။
စိတ္တဇ ဟာသများ (၂)
"ဆရာဘဲ လေယာဉ်ပေါ်မှာဘောလုံးမကန်ရဘူးဆို.....အဲဒါနဲ့ ကျွှန်တော်လည်း လေယာဉ် တခါးပေါက်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာ အခု
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ၀က်မွေးမြူသူတစ်ဦးထံသို့ တစ်နေ့သောအခါ လူကြီးလူကောင်းတစ်ဦး ရောက်ရှိလာပြီးစုံစမ်းလေ၏ ။
" ကျွန်တော့်ဝက်တွေကို ထမင်းကျန်၊ ဟင်းကျန်တွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အပုပ်တွေ ရောစပ်ပြီးကျွေးပါတယ် "
" ကြားရတာစိတ်မကောင်းစရာပဲ၊ ကျွန်တော်က ကမ္ဘာ့တိရိစ္ဆာန်များ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကအရာရှိပါ ။ အခုလိုကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစာတွေ ကျွေးမှုအတွက်ခင်ဗျားကို ဒေါ်လာတစ်ထောင်ဒဏ်ငွေရိုက်ရပါလိမ့်မယ် "
ဒဏ်ငွေဆောင်ပြီး ( ၃ ) လခန့်ကြာပြန်သော် နောက်ထပ်လူကြီးလူကောင်းတစ်ဦး ရောက်လာပြီး စုံးစမ်းပြန်၏ ။
" အားပါး၊ အံ့သြစရာပဲ၊ ကျွန်တော်က ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့က အရာရှိပါ ။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့လူဦးရေလေးပုံတစ်ပုံလောက် နှစ်စဉ်အငတ်ဘေးကြုံနေရတာကိုတောင်မှ ခင်ဗျားကခြိုးခြုံမှုမရှိဘဲ ဖြုန်းတီးပစ်နေတာ အဲဒီအတွက်ခင်ဗျားကို ဒေါ်လာတစ်ထောင်ဒဏ်ငွေရိုက်ပါတယ် "
" ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်က စည်းကမ်းရှိရှိပြန်ပေးပါတယ် ။ မိုးတွင်းတုန်းကငှားသွားတဲ့ထီးကို ဆောင်းတွင်းကျတော့ လာပြန်ပေးပြီး စောင်ပြန်ငှားသွားတယ် ။ နွေရောက်တော့ စောင်လာပို့ပြီး ယပ်တောင်ပြန်ငှားသွားကြတယ်ဗျ " @hp
" ဒါဆို ဒီစန္ဒရားကို ကားပေါ်တင်တဲ့အခါ မင်းကဦးဆောင်ပြီး ဂရုစိုက်တင်ပေးစမ်းပါကွာ " @hp
" မဟုတ်သေးပါဘူးတော်၊ ချက်နည်းပြုတ်နည်းစာအုပ်ထဲမှာ ချဉ်စပ်လို့ရေးထားတယ်ရှင့် " @hp
" ဒီမှာရှင့် လေယာဉ်ပျံမောင်းတဲ့ဆရာကြီး၊ ကျွန်မတစ်ခါမှ လေယာဉ်ပျံမစီးဖူးလို့ ရင်တွေတုန်လိုက်တာရှင်။ ကျွန်မတို့ခရီးသည်တွေအားလုံးဘေးကင်းရန်ကင်းနဲ့ မြေပြင်ပေါ်ပြန်ရောက်မှာပါနော် "
" ကျွန်တော့်မေမေကပြောတယ်ဆရာ၊ ငါ့သားလက်ရေးမလှလည်းကိစ်စမရှိဘူးတဲ့၊ ဘယ်သူမှမဖတ်တတ်ရင်နေပါစေတဲ့၊ ကြီးရင်ဆရာဝန်လုပ်ခိုင်းမှာတဲ့ " @hp
" ဟိုနေ့က လေးထပ်တိုက်ပေါ်က မင်းခုန်ချတာ အံ့သြတယ်ကွာ၊ ရုပ်ရှင်ထဲက စတန့်မင်းသားတွေ စွန့်စားပြတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ကားရိုက်ဖို့လေ့ကျင့်နေတာလား "
" ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် လက်ထပ်ပြီးတဲ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဟန်းနီးမွန်းထွက်ချင်လို့ ခွင့်ဆယ်ရက်လောက် ပေးပါခင်ဗျာ "
" အင်း ..... ခက်တာပဲ။ လောလောဆယ်အလုပ်တွေ ကျပ်နေတော့တစ်ယောက်ယောက် မရှိရင်လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူး။ နှစ်ယောက်စလုံးကငါ့ကုမ္ပဏီရဲ့စံပြ၀န်ထမ်းတွေဆိုတော့ ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးလို့လည်း မပြောရက်ပြန်ဘူး။ ဒီတော့တစ်ယောက်တစ်လှည့်စီသွားကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါရစေကွာ " @hp
" ဪ ..... အဲဒါကျောက်တုံးလေးတွေလား၊ ကျွန်တော်ကသောက်ရမယ့်ဆေးမှတ်လို့ ခုနကပဲသောက်လိုက်မိပြီ ဆရာမ "
" ဟောတော် ဒုက္ခပါပဲ။ အဲဒါရှင်သတိရလာရင် ပြဖို့ထားတာ။ ရှင့်ဆီးအိမ်ထဲက ခွဲထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေရှင့် " @hp
" မင်းဟာကားကို တစ်နာရီမိုင်တစ်ရာနှုန်းလောက်နဲ့ မောင်းလာတယ် ။ ပြီးတော့ညအမှောင်ထဲ ကားရှေ့မီးကို ဖွင့်မမောင်းဘူး ။ လမ်းလည်းမှားလာတယ် ။ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လည်း မပါဘူး ။ ကိုင်း ..... ဒီလောက်တောင်အပြစ်တွေများတာ ဘာပြောချင်သေးလဲ "
" ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ကျွန်တော့်မှာအပြစ်တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ် ။ အဲဒါကတော့ဒီကားကို ခိုးလာတာပါပဲ " @hp
" ရှူး ..... ဘယ်သူမှ လျှောက်မပြောလေနဲ့ ၊ ဓူဝံကြယ်တောင်ဘက်ကို ပြောင်းသွားတာတစ်ပတ်လောက်ပဲရှိေ
သးတယ် မြေးရဲ့ " @hp
" အသုံးပြုပုံမှားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ၊ ကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့ ယပ်တောင်ဟာ လက်နဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးကိုင်ထားပြီး ခပ်စေချင်တဲ့အရာဝတ္တုကို ယပ်တောင်ရှေ့မှာ ဟိုဖက်ဒီဖက် ခပ်မြန်မြန်လှည့်ပေးရပါတယ်ခင်ဗျား " @hp
" ဟင့်အင်း ..... ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ ပထမယောက်ျားပါ " @hp
" ကျေးဇူးတင်ကြောင်း လာပြောတာမဟုတ်ဘူးရှင့် ၊ သူ့လက်ကဟန်းချိန်းပါမလာလို့ " @hp
" ကျွန်မနားကိုအသာကပ်ပြီး လက်ကုတ်ခေါ်သွားတုန်းက ဒီလိုလုပ်လိမ့်မယ် မထင်ခဲ့မိလို့ပါရှင် " @hp
" ဟင်း ..... တယ်ခက်တဲ့လူပဲ ၊ မိကျောင်းမွေးမြူရေးစခန်းမှာ ပြင်ပအစားအစာတွေ လုံးဝကျွေးခွင့် မရှိတာကို သူမသိလို့ထင်တယ် " @hp
" ဟောဟိုထိုင်နေတဲ့လူဟာ ခုနကတစ်ချိန်လုံးလိုလို ကျွန်မကိုစိုက်ကြည့်နေတာ ၊ အခုမမရောက်လာမှပဲ ခပ်တည်တည်နေဖော်ရတော့တယ် "
" အင်း ..... ဒါဆို ကျန်တဲ့တစ်စကို သွားမကိုင်နဲ့ ဓါတ်လိုက်လိမ့်မယ် " @hp
" ခင်ဗျားတို့ ထမင်းဆိုင်က ကြက်သားဟင်းပန်းကန်ကို ကြည့်ပါဦး ၊ အရိုးနဲ့အရေခွံချည်းပဲ "
မဆုတ်သာ မတိုးသာ အခြေအနေ ( DEADLOCK )
အလုပ်ရှင်က အတွင်းရေးမှူးမကို ပြောသည်။ ငါ့တို့ နိုင်ငံ့ခြားကို
တစ်ပတ်ကြာ သွားရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် စီစဉ်စရာရှိတာတွေ စီစဉ်ထား။
အတွင်းရေးမှူးမက သူ့ယောင်္ကျားထံ ဖုန်းဆက်၏။ ကျွန်မ သူဌေးနဲ့ ကျွန်မ
နိုင်ငံခြားကို တစ်ပတ်ကြာ သွားရလိမ့်မယ် ။ ရှင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်
ကြည့်နေနော် ယောကျာင်္းက သူ့တိတ်တိတ်ပုန်း ချစ်သူထံဖုန်းခေါ်သည်။
ကိုယ့်မိန်းမ နိုင်ငံခြားကို တစ်ပတ်ကြာသွားရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်
ကိုယ်တို့ တစ်ပတ်လုံး အတူနေကြရအောင်။ တိတ်တိတ်ပုန်းချစ်သူက သူမ သီးသန့်
ကျူရှင်ပေးနေသော ကောင်လေးထံ ဖုန်းဆက်သည်။ ငါ တစ်ပတ်လောက်
အလုပ်လုပ်စရာရှိတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းစာလာသင်စရာ မလိုဘူး ကောင်လေးက
သူ့အဘိုးထံ ဖုန်းဆက်သည်။ ဘိုးဘိုး၊ ကျွန်တော့်ဆရာမ အလုပ်များနေလို့
တစ်ပတ်လောက် စာမသင်ရဘူး။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ပတ်လုံးနေပြီး
အချိန်ဖြုန်းရအောင်။ အဘိုး(အလုပ်ရှင်သူဌေး)က သူ့အတွင်းရေးမှူးကို
ဖုန်းဆက်သည်။ ဒီအပတ်ငါမြေးနဲ့ အချိန်ဖြုန်းရမယ်။ အဲဒီ အစည်းအဝေးကို
အတွင်းရေမှူးက သူ့ယောင်္ကျားကို ဖုန်းခေါ်သည်။ ကျွန်မအလုပ်ရှင်က ဒီတစ်ပတ်ထဲ
လုပ်စရာလေးတွေရှိတယ်။ ခရီးစဉ်ကို ဖြက်လိုက်တယ်။ ယောင်္ကျားက
သု့တိတ်တိတ်ပုန်းချစ်သူထံ ဖုန်းဆက်သည်။ ငါတို့ ဒီတစ်ပတ် အတူတူ
အချိန်မဖြုန်းနိုင်တော့ဘူး။ ငါ့မိန်းမ ခရီးစဉ် ဖျက်လိုက်တယ်။
ဒီတစ်ပတ် ငါတို့ ပုံမှန်အတိုင်း စာသင်ဖို့ရှိတယ်။ ကောင်လေးက
သူ့အဘိုးထံဖုန်းဆက်သည်။ ဘိုးဘိုး ကျွန်တော့်ဆရာမက ပြောတယ်။
ကျူရှင်တက်ရမယ်တဲ့ အဘိုးနဲ့ အဖော်မလူပ်ပေးနိုင်တာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
အဘိုး (အလုပ်ရှင်)က သူ့အတွင်းရေးမှူးထံ ဖုန်းဆက်သည်။ ဘာမှ မစိုးရိမ်နဲ့။
အဲဒီ အစည်းအဝေးကို ဒီတစ်ပတ် ဒို့တက်ရလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်
ကိုကို့ရဲ့ အနမ်းပေါင်း ၁၀၀ အတွက်ကျေးဇူး တင်ပါတယ
ဘ၀ကြင်ယာဖေါ် ရွေးချယ်နည်း (ရယ်စရာလေးပါပဲ)
" အစဉ်အမြဲသိမ်း ၇င်ထဲထိန်းချင်၇င် *ယာဉ်ထိန်းရဲ *ကိုလည်းမစဉ်းစား
နတ်သဘင် အစည်းအဝေးက အချိန်နီးကပ်နေပြီ ..။ ဦးရုက္ခစိုး အသည်းအသန် ပြေးသွားရသည်။ ဆီဈေးကျပေမယ့် ကားခတွေက ဈေးမကျတော့ တက္ကစီမစီးနိုင် ဘတ်စ်ကားနဲ့ပဲ ဖြစ်သလို သွားလိုက်ရသည်။ ကျင်းပရာနေရာက နေပြည်တော် ကြတ်ပြေးနှင့် တည့်တည့် အထက် နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်က ဆီအိုးနား နတ်ဘုံနတ်နန်းမှာ .. ။ ဒိုင်ခံ ရှင်းလင်း ဖြေကြားမည့်သူက ချိုကုတ်ဒူးကြီး၏ ကိုယ်စောင့်နတ် ... ။ နတ်တို့ဥသျှောင် သိကြားမင်းက နာကြားမည် ..။ မေးမည့် ပြောမည့်သူများက မြန်မာ့နတ်ပေါင်းစုံ …။
ဦးရုက္ခစိုးရောက်တော့ အချိန်လွန် နေသော်လည်း အခမ်းအနား မစသေး။ ခန်းမထဲ ကမန်းကတန်း ဝင်ပြီး တွေ့ရာ နေရာမှာ ထိုင်လိုက်ရာ အသက်ကြီးကြီး နတ်အမယ်အို တပါး ဘေးတွင် ထိုင်မိလျက်သား ဖြစ်နေသည်။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဟင် .. အမေဂျမ်းပါလား။ မျက်နှာလည်းမကောင်းဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ။
အမေဂျမ်း။ ။ ဟုတ်တယ်။ ကျုပ် ခု နာမည်ပြောင်းတော့မလို့။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဟင် ဒီနာမည်က အမေဂျမ်းနဲ့ ဒီလောက်လိုက်ဖက်တဲ့ဟာ ..။ ဘာလို့ ပြောင်းမှာလဲ။
အမေဂျမ်း။ ။ ဟဲ့ .. ငါက ကြမ်းလို့ ရမ်းလို့ အမေဂျမ်းဆိုတဲ့ နာမည်ယူထားတာလေ .. ။ ခု ငါမနိုင်တဲ့ အမေကွိုင် ဆိုတာ ပေါ်နေပြီတဲ့။ ချိုကုတ်ဒူးကြီး ကတော်ပေါ့ ..။ အဲဒါငါ့နာမည်ကို အမေပျော့ ဆိုပြီး ပြန်ပြောင်းမလို့ လာပြောတာ။ အောင်မယ်လေး ကိုကိုတက်ခါးရဲ့ .. ကျုပ်တော့ ဘဝဆုံးပါပြီ။ ဂျမ်းလေးတော့ ဘဝပျက်ပါပြီ။ တသက်လုံး ကြမ်းခဲ့ရမ်းခဲ့ သမျှ .. ကျုပ်ထက်သာတဲ့သူကို နေရာဖယ်ပေးရတော့မယ်တော့ .. အဟော့ .. အဟော့။
“စကတည်းက ယဉ်သကိုဖြစ်နေပြီ” ဟုတွေးရင်း ဦးရုက္ခစိုး .. နေရာ ရွှေ့လိုက်သည်။ သူရွှေ့လိုက်သည့်ခုံ ဘေးမှာ ဗိုက်ပူနံကား နတ်တပါး ထိုင်နေသည်။ တကိုယ်လုံးလည်း ဝါထိန်နေ၏။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဒီက နောင်ကြီးကို မြင်ဖူးသလိုပဲဗျ။ ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါကလည်း တောက်ပလိုက်တာ။ နောင်ကြီးက ဘယ်သူလဲဟင် .. (မေးရင်း မျက်စိက သူ့လက်ထဲမှာ အရက်ပုလင်းကို တွေ့လိုက်မှ မှတ်မိသွားသည်) ဟင် .. ကိုကြီးကျော် .. တို့ကိုကြီးကျော်မဟုတ်လား။
ကိုကြီးကျော်။ ။ အေ့ .. ဟုတ်တယ်။ မင်းက ဘယ်သူတုန်း။ ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ် ဂရုမစိုက်ဘူးကွာ။
ရုက္ခစိုး။ ။ ကျနော် .. ကျနော်က ချင်းမိုင်ရုက္ခစိုးပါ။ ကိုကြီးကျော် အသားလေးတွေ ဝါဝင်းနေတာပဲ .. ဘယ် လိုးရှင်းလိမ်းလဲဟင်။
ကိုကြီးကျော်။ ။ ဟေ .. အဲဒါလိုးရှင်းလိမ်းလို့မဟုတ်ဘူးဟ။ မြန်မာပြည်မှာ အရက်တုတွေပေါလို့ ကိုကြီးကျော်တို့ အသည်းရောဂါ ရနေတာဟ။
ဦးရုက္ခစိုး။ ။ ခင်ဗျာ .. ဒါဆို ဘီလား .. စီလား။
ကိုကြီးကျော်။ ။ နောက်ဆုံးပေါ် အသည်းရောဂါ ဘီအီးဒီစီ ဟေ့ သိပြီလား။ တော်တော်လျှာရှည်တဲ့နတ်။ အသည်းရောင်ပြီး အသားဝါနေတာ ကိုများ ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါ တောက်ပသလေး ဘာလေးနဲ့ .. တုံးလိုက်တဲ့ကောင်ကွာ။
ဦးရုက္ခစိုး။ ။ ဒါဆို ရိုးရာမပျက် ထန်းရည်လေးပဲချပါလားဗျာ (လေပျော့လေးနှင့်)။
ကိုကြီးကျော်။ ။ ဟ .. သန်းရွှေဆိုတဲ့ကောင် လက်ထက်မှာ ထန်းရည်တောင် မစစ်တော့ဘူး ..။ ခု ကျုပ်ကို အတုတွေပဲ ဆက်နေလို့ အသည်းရောဂါ ရနေပါတယ်ဆိုမှ .. ။ ဒါကြောင့် ဟိုအကောင် ငရွှေ့ပီအေကို ကွန်ပလိန်း တက်ဖို့လာတာ .. ။ အရေးထဲ ရုက္ခစိုးဆိုတဲ့ကောင် သောက် စကားလာရှည်နေတယ်။
ကိုကြီးကျော်က ဘုတောလိုက်ရာ ဦးရုက္ခစိုးနည်းနည်း လန့်သွားသည်။ နတ်သဘင် ဆိုတော့ ဖိုးရှုပ်နှင့် ကြွက်စုတ် ကိုလည်း ခေါ်လာလို့မရ။ အားငယ်လာသည်။ အစည်းအဝေးကလည်း မစနိုင်သေး။ သိကြားမင်း မရောက်သေးဘူး ကြားသည်။ ခဏနေတော့ သိကြားမင်း ချွေးသံတရွှဲရွှဲနှင့် ရောက်လာပြီး .. သူထိုင်ရမည့်ခုံမှာ ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။
သိကြားမင်း။ ။ ကျုပ်နည်းနည်း နောက်ကျသွားတဲ့အတွက် နတ်အပေါင်းကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျုပ်မှာလည်း ကျုပ်အရေးနဲ့ ကျုပ် ဒုက္ခရောက်နေလို့ ..။ ဟို မြောက်ကိုရီးယားဆိုတဲ့ အကောင်တွေ ပစ်လွှတ်လိုက်တဲ့ ဒုံးကျည်က ကျုပ်ကျောက်ဖျာကို အဖျားလာခတ်သွားတာလေ .. အဲဒါသုဇိတာတို့က မနေရဲလို့တဲ့ .. သူတို့ကိုပါ တပါတည်း ခေါ်ခဲ့ရတယ် .. ကိုင်းကိုင်း .. စလို့ရပြီ စကြတော့။
သိကြားမင်းက စခိုင်းလိုက်သည်နှင့် အလွန်ပြောချင်ဆိုချင်နေသူ တောင်ကြီး ဘိုးဘိုးကြီး ထိုင်ရာက ထလိုက်သည်။
တောင်ကြီးဘိုးဘိုးကြီး။ ။ ဒီလိုပါ .. ကျုပ် တသက်လုံး လုပ်ကိုင်စားသောက်လာတဲ့ လက်ဖက်တွေကို ခုမှ ရမယ်ရှာပြီး ဟိုပိတ်သည်ပိတ်နဲ့ လုပ်နေပါတယ်။ အဲဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ သိချင်တယ်။
တောင်ကြီးဘိုးဘိုးကြီးစကားကို ဘေးက ကိုးမြို့ရှင်နှင့် အမေပုလဲယဉ်တို့က ထောက်ခံသည်။
ကိုးမြို့ရှင်။ ။ ဟုတ်ပါတယ် ရှင်းပါ။ ဒီကိစ္စအရေးကြီးတယ်။ ကျုပ်တို့က တသက်လုံး လက်ဖက်စား လာတာ။ လက်ဖက်မှ မစားရရင် ဘာသွားစားရမှာလဲ။ သူများလို အရက်လည်း သောက်တာမဟုတ်။
ကိုကြီးကျော်။ ။ ဟေ ဒီလိုကိစ္စမျိုးရှိလား..၊ ပြောချင် ကိုယ့်ကိစ္စကိုယ်ပြောကြဟေ့နော် .. သူများကို လာစောင်းမပြောနဲ့။ ကိုကြီးကျော်တဲ့ တကျော်တည်းရှိတယ်ကွ။ တို့က လက်ဖက်နဲ့မမြည်းဘူး ကြက်နဲ့ပဲမြည်းတယ် .. ကြက်ကြော် .. ကြက်ကြော် ..။
ကိုကြီးကျော်က သူ့ကိုစောင်းပြောသည်ထင်ပြီး ထကြမ်းနေသောကြောင့် သိကြားမင်း၏ ပီအေ မာတလိက ငြိမ်ငြိမ် နေပေးဖို့ တောင်းပန်နေရသည်။
ချိုကုတ်ပီအေ။ ။ ဟာ .. ဒါက ဒီလိုရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စက ချိုကုတ်ဒူးကြီး တကယ်မသိတာပါ။ အနှစ် ၂၀ လောက် အိပ်ပျော်နေတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးက ခုမှ လန့်နိုးပြီး လုပ်မိလုပ်ရာ ထလုပ်တာပါ။ သူလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မှာ ဆိုတော့ .. အလုပ်လုပ်ကြောင်း ပြချင်တာနဲ့ ဝင်ရမ်းတဲ့သဘောပါပဲ။ စားကြပါ .. ဆက်စားကြ .. ဘာမှမဖြစ်ဘူးစိတ်ချ။
ချိုကုတ်ဒူးကြီး၏ ကိုယ်စောင့်နတ်က သွားကလေးဖြီးကာ ထရှင်းသည်။ ထိုစဉ် အပေါက်ဝမှ ဆူဆူညံညံအသံများ ထွက်ပေါ်လာသည်။ အပေါက်စောင့်နတ်သားက ချက်ချင်းဝင်ခွင့်မပေး။ အပြင်တွင် ရောက်နေသူတဦးက ဦးရုက္ခစိုးကို တွေ့ကာ “ချင်းမိုင်ရုက္ခစိုးရေ .. လုပ်ဦးဟ .. ။ ငါတို့က နာဂစ်ရုက္ခစိုးတွေ။ အထဲ ဝင်ခွင့်ရအောင် ပြောပေးဦး” ဟု လှမ်းအော်သည်။ ဦးရုက္ခစိုးက အပေါက်စောင့်နတ်နှင့် ညှိပေးလိုက်မှ အဆင်ပြေသွား သည်။
နာဂစ်ရုက္ခစိုး။ ။ သိကြားမင်းကြီးခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့အားလုံးက နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် လဲသွားတဲ့ သစ်ပင်တွေက ရုက္ခစိုးတွေပါ။ ခု နတ်ဒုက္ခသည်စခန်းတခုမှာ နေနေရပါတယ်။ ကျနော်တို့ သစ်ပင်တွေအားလုံး မရှိတော့ ကျနော်တို့တွေ လည်း နာဂစ် ရုက္ခစိုးတွေ ဖြစ်ကုန်ပါတယ်။ အဲဒါ သစ်ပင်တပင်စီ ပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။
သိကြားမင်း။ ။ အင်း .. ဒါတော့ ဟုတ်တယ် .. ကိုယ်စောင့်နတ်ကြီး။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။
ချိုကုတ်ပီအေ။ ။ ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့မရဘူးလေ။ နာဂစ်သစ်ပင်တွေအားလုံး ပန်းပုထု ရောင်းပြီး ဗိုလ်ချုပ် ကတော်တွေအတွက် ရန်ဘုံးငွေ .. အဲ .. ဟိုဒင်းပေါ့ဗျာ။ ဘယ်လက်ထက်မှာမှ မဖြစ်ဘူးခဲ့တဲ့ နာဂစ်၊ ချိုကုတ်ဒူးကြီးရဲ့ လက်ထက်မှ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်တာ ဆိုတော့ အမှတ်တရအနေနဲ့ လုပ်ထားသင့်တယ်မဟုတ်လား။
သိကြားမင်း။ ။ ဒါဆို တခြားတောပြောင်းပေးလိုက်လေ .. ။
ချိုကုတ်ပီအေ။ ။ အဲ .. အဲဒါကလည်း တေဇတို့ခုတ်တာ ကုန်သလောက်ဖြစ်နေလို့ အဲဒီတောက ရုက္ခစိုး တွေအတွက်တောင် တန်ဖိုးနည်း သစ်ပင် စိုက်ပေးရဦးမှာ ..။ ဒီလိုလုပ်ပါလား ဒီရုက္ခစိုးတွေကတော့ လောလောဆယ်မှာ ဒုက္ခသည်စခန်းတခုခုမှာနေ .. ။ ပြီးရင် .. အနောက်နိုင်ငံတခုခုကို ထွက် .. ဟိုမှာ နိုင်ငံသားခံယူ .. ခုထဲက ဆူရှီလေး ဘာလေး လိပ်တာ သင်ထားကြပေါ့။
ဦးရုက္ခစိုး။ ။ (အတွေးထဲမှ) ငါပါ ရောပြီးဆူရှီလိပ်ရမယ့် သဘောရှိတယ် .. ခပ်ဝေးဝေးရှောင်နေမှ ..။
ဦးရုက္ခစိုး ထိုင်နေရာက အသာထပြီး နေရာရွှေ့ဖို့ပြင်ရာ ဘေးက ရုပ်ခပ်ဆင်ဆင် နတ်နှစ်ပါးရှေ့မှ ကွယ်သလို ဖြစ်သွားသဖြင့် တဦးက ဦးရုက္ခစိုးကို တွန်းဖယ်လိုက်သည်။
ဦးရုက္ခစိုး။ ။ ဟာ ဗျတ်အိတ် (8) နဲ့ ဗျတ်နိုင်း (9) ညီနောင်ပါလား။
ညီနောင်နှစ်ပါး။ ။ ဘာဗျ .. ဗျတ်ဝိနဲ့ ဗျတ်တ လုပ်ပါ .. ခင်ဗျားက ရှေ့ကလည်းကွယ်သေး .. နာမည်လည်း ဖျက်သေးတယ်။
ဦးရုက္ခစိုး။ ။ ခင်ဗျားတို့ တီရှပ်တွေမှာ ထိုးထားတာပဲ ကြည့်ဦးလေ။ ဝ လုံးကြီးတင် ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လို အိတ်ပဲဟာ။ တဝမ်းပူကို ထောင်လိုက်ရင် နိုင်း ဖြစ်တာပဲ .. ဒါကြောင့် ဗျတ်အိတ်နဲ့ ဗျတ်နိုင်းလို့ ခေါ်တာ။
ဗျတ်ဝိ။ ။ အင်း မဆိုးဘူး။ ခင်ဗျားဒီလို လိုရာဆွဲတွေးတတ်ပုံနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ စာပေစိစစ်ရေး ညွှန်မှူး လုပ်သင့်တယ် သိလား။
ဦးရုက္ခစိုး။ ။ မဖြစ်ပါဘူးဗျာ ..။ ကျနော်က အယ်ဒီတာချုပ်တွေ ပေးစာကမ်းစာ စားချင်တာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ အမတ်လုပ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်မလား စဉ်းစားနေတာ ဟဲဟဲ။ ဒါနဲ့ ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်က ဘာဖြစ်ကြ ပြန်တာလဲ။
ဗျတ္တ။ ။ ဟာဗျာ .. ကျုပ်တို့ဟာကျုပ်တို့ ဖောင်နဲ့မျောလာတာကို ရိုဟင်ဂျာပါဆိုပြီး အတင်း ဓာတ်ပုံတွေရိုက် .. သတင်းတွေလုပ်လို့ဗျို့ .. ။ မျောတာတောင် အေးအေးဆေးဆေး မမျောရဘူး။ ပြီးတော့ ကျုပ်တို့ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သွားခိုင်းလို သွားခိုင်း .. မြန်မာပြည်ပြန်ခိုင်းလိုခိုင်းနဲ့ ..။ အဲဒါလာတိုင်တာ။ ခု အလှည့်မကျသေးလို့ စောင့်နေတာဗျ။
ထိုစဉ်အလှည့်ကျသည့် အနီရောင်ဝတ်စုံနှင့်တဦး ရုတ်တရက်ထရပ်လိုက်ရာ ဗျတ်ဝိက အလန့်တကြားနှင့် “ဟာ .. ထိုင်းက အနီရောင်ဝတ် ယူဒီဒီ ကိုယ်စားလှယ် ထင်တယ်ဟ .. အဲဒါဆိုရင်တော့ ကြောက်တယ်” ဟု ထအော်သည်။
ဦးရုက္ခစိုး။ ။ မဟုတ်ပါဘူးဟ .. ဇော်ဂျီပါ။
ဇော်ဂျီ။ ။ သိကြားမင်းကြီးခင်ဗျာ .. ။ ကျနော်ခု ဆေးရှာရတာ အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ ရှိသမျှသစ်တောလည်း ပြုန်းတာကော ခုတ်တာကောကုန်ပြီ။ ခု ဇော်ဂျီ တောပြောင်းရမလိုဖြစ်နေပြီ။ ရုက္ခစိုးတွေနဲ့ ဒုက္ခသည်စခန်း သွားနေရ ကောင်း မလားမသိဘူး။ ရသမျှ ကြိတ်ရောင်းတော့လည်း တိုင်းရင်းဆေးဝါးမှတ်ပုံမတင်လို့ တဲ့။ အမယ်မင်း ဇော်ဂျီ သေချင်တယ်၊ ဇော်ဂျီသေချင်တယ် သိလား။ သူယောင်မယ်လေးတွေ ရှိနေလို့နော် .. ဟင်း ..။
ဇော်ဂျီက ပြောရင်းဆိုရင်း ငိုချင်းချလိုက်သဖြင့် သိကြားမင်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်ကာ ခေါင်းကုတ်နေစဉ် နောက် တယောက် နေရာမှထပြန်သည်။ ဒီတခါထလိုက်သူက ပုပ္ပားမယ်တော်ကြီးဖြစ်သည်။ ပုပ္ပားမယ်တော်ကြီး ပြောမလို့ ပါးစပ်ပြင်နေတုန်း မနှဲလေးကပါ အတင်းဝင်ပြောဖို့ လုပ်သည်။ ပုပ္ပားတောင်မကြီးတွင် လမ်းဖောက်သည့်ကိစ္စ မယ်တော်ကြီး မကျေနပ် .. ၊ မနှဲလေးကလည်း ဘဲဥဈေးကြီးသည့်ကိစ္စ တိုင်သည်။ သိကြားမင်း အတော်လေး စိတ်ရှုပ်နေပုံ ရသည်။ သူ့ရှေ့က စားပွဲကို “ဘုန်း” ခနဲနေအောင် ထုလိုက်သည်။
သိကြားမင်း။ ။ ကဲကဲ .. သန်းရွှေရဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ်ရေ .. မင့်အကောင်ကတော့ လူတွေတင်မကဘူး နတ်လောကကိုပါ ရှုပ်နေပြီ။ ဘယ်သူ့ လက်ထက်မှာမှ သူ့လက်ထက်လောက် ကိစ္စမများဘူး .. ကဲ .. ရှုပ်တယ်။ အဲဒီ ချိုကုတ်ဒူးကြီးကို ငရဲပြည်သာ ပို့လိုက်တော့ ..။
ထိုစဉ် တနေရာမှ “ဝုန်း” ခနဲ အသံကြီးပေါ်ထွက်လာသည်။ ယမမင်းကြီး ထရပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယမမင်းကြီး။ ။ သိကြားမင်းကြီးခင်ဗျာ .. ကျေးဇူးပြုပြီး အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို ငရဲပြည် မပို့လိုက်ပါနဲ့ …။
သိကြားမင်း။ ။ ဟေ .. ဘာလို့လဲ။ သူ့ကိုကြော်ဖို့ ဆီမလောက်မှာ စိုးလို့လား။ ဆီ ပါမစ် ထပ်ချပေးမယ်လေ။
ယမမင်းကြီး။ ။ မဟုတ်ဘူး .. မဟုတ်ဘူး .. ကြောက်လို့ဗျ ..။ တော်ကြာ ကျုပ်ငရဲပြည်ကို အာဏာ လာသိမ်းရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ တော်ပြီပြန်မယ် .. အားလုံး တာ့တာ။
ပြောပြောဆိုဆို ယမမင်းကြီး ထွက်ပြေးသွားသည်။ တက်ရောက်လာသော နတ်အပေါင်းတို့ မကျေနပ်ကြ။ ဖြေရှင်း မပေးနိုင်သော သိကြားမင်းကို စိတ်ဆိုးနေကြသည်။ ထိုစဉ် အခြေအနေမဟန်မှန်းသိသည့် သုဇိတာတို့အဖွဲ့က သိကြားမင်းကို နောက်ဖေးပေါက်က လာခေါ်သည်။
သုဇိတာ။ ။ မောင်တော် .. မောင်တော် .. လာလာ။ ဒီနောက်ဖေးပေါက်ကထွက်။ ဘာမှစိတ်မညစ်နဲ့ ဘန်ကီမွန်းတို့ ဂန်ဘာရီတို့တောင် ရှင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူး…။ နောက်သူ့ဟာသူ ပြေလည်သွားလိမ့်မယ်။
သိကြားမင်း။ ။ အင်း ဒီနေရာမှာတော့ ရှေးနည်းအတိုင်း မိန်းမစကား နားထောင်တာ ကောင်းပါတယ်လေ။
သိကြားမင်းထွက်သွားတော့ ချိုကုတ်ဒူးကြီးပီအေဆီ ဖုန်းဝင်လာသည်။ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးက ဖုန်းဆိုတော့ လိုင်းက ခန်းမထဲမှာမမိ .. ၊ အပြင်ထွက်ပြောရသည်။
ချိုကုတ်ပီအေက “ဟယ်လို .. ဟယ်လို .. ဟဲလို .. ဟုတ်ကဲ့ လာပြီ လာပြီ .. ခုလာပြီ .. အားလုံး အဆင်ပြေတယ် .. ဟုတ်ပြီ .. ဘာမှမပူနဲ့ .. အားလုံးအေးဆေး .. အိုကေနော်” ဟူ၍ ဖုန်းကိုပြန်ဖြေရင်း ရူးချင်ယောင်ဆောင်ကာ လစ်ထွက် သွားသောကြောင့် ခန်းမထဲတွင် ဒေါကန်နေသောနတ်အပေါင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇာတ်လိုက်ကြီး ဦးရုက္ခစိုးသာ ယောင်ချာချာ ကျန်ခဲ့လေတော့သည်။
တစ်ခါက လူတွေကို အရမ်းကူညီတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ သေဆုံးပြီးနောက်
ကောင်းကင်ဘုံရောက်ပြီး နတ်သားဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ နတ်သားဖြစ်သွားသည့်တိုင်
သူဟာ လူ့ပြည်ကိုဆင်းပြီး လူတွေကို အကူအညီတွေ ပေးခဲ့ပြန်တယ်။ လူတွေဆီကနေ
ပျော်ရွှင်ခြင်းရနံ့တွေ ရှုရှိုက်နိုင်ဖို့ သူမျှော်လင့်ကြိုးစားခဲ့တယ်။
တစ်နေ့မှာ နတ်သားဟာ အခက်အခဲကြုံနေပုံရတဲ့ လယ်သမားတစ်ဦးနဲ့ ဆုံခဲ့တယ်။
လယ်သမားက နတ်သားကိုတွေ့တာနဲ့ "ကျွန်တော့်အိမ်ကကျွဲ သေသွားလို့ လယ်တွေကို
ကျွန်တော် ဆက်မထွန်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်" လို့ ရင်ဖွင့်တယ်။
လယ်သမားစကားကို ကြားတော့ နတ်သားက သန်မာတဲ့ ကျွဲတစ်ကောင်
ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်။ လယ်သမားဆီကနေ ပျော်ရွှင်ရနံ့ကို
နောက်တစ်နေ့မှာ နတ်သားက စိတ်ပျက်လက်ပျက် ထိုင်ငေးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့
ဆုံပြန်တယ်။ နတ်သားကိုတွေ့တော့ အဲဒီလူက "ကျွန်တော်ငွေတွေ လူလိမ်လို့
ကုန်ပြီဗျာ၊ ရွာပြန်ဖို့ လမ်းစရိတ်မရှိလို့ပါ" လို့ ပြောတော့ နတ်သားက
သူ့အတွက် လမ်းစရိတ် ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီလူဆီက ပျော်ရွှင်ရနံ့က
တစ်နေ့မှာ နတ်သားဟာ ကဗျာဆရာတစ်ဦးကို တွေ့ပြန်တယ်။ ကဗျာဆရာက
ငယ်ရွယ်နုပျို ချောမောပြီး၊ ငွေကြေးလည်း ပြည့်စုံသလို၊
လှပတဲ့ဇနီးတစ်ဦးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကဗျာဆရာ
ကဗျာဆရာကို နတ်သားက "ဘာကြောင့်မပျော်သလဲ? ဘာများကူညီရမလဲ?" လို့မေးတော့
ကဗျာဆရာက "ကျွန်တော့်မှာ ဘာမဆိုရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုပဲ လိုအပ်နေတယ်။
ကျွန်တော့်ကို ပေးနိုင်မလား?" လို့ နတ်သားကို ပြန်မေးတယ်။
ကဗျာဆရာ စကားကြောင့် နတ်သားအခက်တွေ့သွားခဲ့တယ်။ တအောင့်ကြာမှ "ကောင်းပြီ"
ဆိုပြီး ကဗျာဆရာပိုင်ဆိုင်သမျှ အားလုံးကို ယူဆောင်သွားခဲ့တယ်။
ကဗျာဆရာရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ယူသွားတယ်၊ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကို ယူသွားတယ်၊
သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကို ယူသွားတယ်၊ ဇနီးချောရဲ့ အသက်ကိုယူပြီး
နတ်သားထွက်သွားခဲ့တယ်။ တစ်လကြာပြီးနောက် ကဗျာဆရာဆီ
နတ်သားပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကဗျာဆရာက ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ
လဲလျောင်းပြီး ဆာလောင်လို့ သေလုမျောပါး ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ နတ်သားက ကဗျာဆရာကို
လဝက်လောက်နေပြီ ကဗျာဆရာကို နတ်သားသွားကြည့်ပြန်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကဗျာဆရာက
ဇနီးသည်ကို ပွေ့ဖက်ပြီး နတ်သားကို ကျေးဇူးတင်နေခဲ့တယ်။
အထီးကျန်တယ်၊ ပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတာ နှိုင်းယှဉ်မှုတွေကိုပြတဲ့
နာမဝိသေသနတွေဖြစ်တယ်။ အထီးကျန်တာကို မခံစားဖူးရင် ပျော်ရွှင်တဲ့အရသာကို
ဘယ်လာခံစားတတ်မလဲ? လူတွေကလည်း လူတွေပါပဲ.. လက်လွတ်ရခါနီးမှ၊
လက်လွတ်သွားမှ တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း သိတော့တယ်။ တကယ်တော့
ပျော်ရွှင်ခြင်းက ကိုယ်နဲ့အနီးဆုံး နေရာမှာ အမြဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။
အရမ်းမောပန်းနွမ်းနယ်တဲ့အချိန် ကျောခင်းစရာ နေရာလေးတစ်ခုရှိတာလဲ
အားရပါးရ ငိုနေတဲ့အချိန် ဘေးမှာရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်က တစ်ရူးလေးတစ်ရွက်
ပျော်ရွှင်ခြင်းမှာ တိကျတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေ မရှိခဲ့ဘူး။
သာမန်ကိစ္စလေး တစ်ခုလည်း ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ပေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်အထိ ပျော်ရွှင်သလဲ? ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ အတိုင်းအတာကို
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ စိတ်မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ပြည့်နေခဲ့ပြီလား?
ဒါမှမဟုတ် စိတ်ပျက်ခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေခဲ့သလား?
ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ တံခါးလာခေါက်တဲ့အခါ ကိုယ့်ရင်ခွင်တံခါးကို
ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ထားပေးပါ။ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ ကိုယ့်ရင်ဘတ်ထဲ အလုံးအရင်းနဲ့
အရာအားလုံး အချစ်တွေ နဲ့ပဲ တည်ဆောက်ကြရအောင်